Odayaasha magaalada Cadaado oo ka hortagaya dagaalo ka dhaca magaalada – STAR FM SOMALIA
Odayaasha magaalada Cadaado oo ka hortagaya dagaalo ka dhaca magaalada
Waxaa saaka degen xaalada magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo shalay ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeyo ciidamada booliska iyo Nabbad sugidda Galmudug.
Saacadihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Cadaado ka taagnaa cabsi ay qabeen dadka deegaanka, waxaana hadda la sheegayaa in xaalada tahay mid degen xiisadana ay qabowday.
Waxaa jira eedeymo ay jeedinayaan xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Galmudug, kuwaasi masuuliyiinta maamulka Galmudug ku eedeeyay inay ka dambeeyeen dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Cadaado.
Odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda gobolka Galgaduud oo ku sugan magaalada Cadaado ayaa ku baxay shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Cadaado, waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin dagaal magaalada markale ka dhaco.
Iska hor imaadkii shalay ka dhacay magaalada Cadaado ayaa sababay dhimashada ilaa seddex ruux, kuwaasi oo dhinacyada dagaalamay ahaa.
C/risaaq Jurile “Beelaha Daarood uma tartamayaan xilka guddoonka aqalka sare”
Alshabaab oo toogasho ku dishey mid kamid ah ciidamada Uganda oo maxbuus u ahaa